Index du Forum � � Vous �tes nouveaux ... � � Ahoana ny hevitrareo amin ito zavatra voalaza tamin ny rdj mozika 2005
Auteur Ahoana ny hevitrareo amin ito zavatra voalaza tamin ny rdj mozika 2005
Post� : 2006-04-18 12:08
Ito zavatra ito dia afaka jerena ao amin www.sobika.com , ao amin ny "reportage" rdj mozika 2005:
>> "Ce que j'appr�cie chez Ambondrona, c'est qu'ils ne sont pas enferm�s dans un look hardos cheveux long cuir santiags devenu vite ringard."
Io fa miverina indray ilay k�zy momban ilay volo lava sy ny fiakanjon'ny bandy. Resaka efa ela tany Dago io razoky a!
Ny ahy aloha ny teny tonga dia omeko ny webmaster an i Sobika, io tompoko tsy ny toebatana rehetra no mahazaka vy mavesatra, ary tsy ny toetsaina rehetra no mahazaka mozika mavesatra ka aza dia mitsara ivelany ihany, sady marihiko etoana fa Ambondrona tsy mpanao hardrock. Raha ireny mantsy ny hardrock anareo dia azoko antsaina hoe maninona ianareo no miteny izany!!!
Ka mba lanjalanjao sy fantimpateno ihany razoky ny zavatra lazaina fa sao dia manahirana a!
Post� : 2006-04-19 20:06
Manaraka andrazoky aho.
Marina ny anao, tsy ny rehetra no mahatakatra an'ilay kozy... si bien qu'on finit par m�langer tout et n'importe quoi...
Post� : 2006-04-20 23:34
"Ce que j'appr�cie chez Ambondrona, c'est qu'ils ne sont pas enferm�s dans un look hardos cheveux long cuir santiags devenu vite ringard."
- Ka normal ny look-ny satria ry lerony tsy hardos, ary raha milaza ho hardos izy dia ringard ndray kosa ny look-ny. :l
- Ilay nikozy indray tsy omena tsiny satria tsy ao anatin'ilay revy, tsy kopy izy hoe izy no tena ringard :l :l :-2
Post� : 2006-04-27 18:26
Izany ry zalahy no atao hoe "miteniteny foana" a !
Tsy voalohany io ary tsy ho farany koa :-n
Fa aleo izy hipetraka @ toerana misy azy raha tsy mahafantatra, tsy misy tsiny akory ... :@
Post� : 2006-05-11 16:54
Aza omena tsiny izy ry zalah a fa tsy fantany izay ataony e !!!
Raha ambondrona kosa ve no manao lava volo sy cuir ary santiag de hoy aho hoe aleoko mamono tena raha izany :-2
Ho an'ilay webmaster ao @ sobika de mba ampianaro ry zalah izy fa tsy natao ho an'ny adala sy hendry retra io ny hilaza hoe hardos sy mahazaka feeling hardos!!
Post� : 2006-05-26 01:09
Tsss, ilay Sobika tena matimatin"ny Ambondrona miits, hany ka vao mihetsika kely dia Ambondrona. Indray mandeha tao nisy interview an'ilay tarika Bismak (Annick). Dia nisy fanontaniana hoe "fantatrao ve ilay groupe Ambondrona?", dia namaly ilay sipa hoe "juste fantatro anarana fotsiny". Nony nataon'ry Sobika @izay ny pub momba ilay Bismak, dia hoe ohatran'ny Ambondrona patati patata ... Nefa tsy hitako miits izay hitovizan'ilay Bismak sy Ambondrona na dia samy Pop Rock aza.
Post� : 2006-05-27 20:54
Tsy haiko aloha na izaho no hafa fijery fa ny tsikeran ilay razoky ao amin sobika.com dia tena tsy ampy fanadihadiana, ka ohatran lasa tsikera samirery , amin'ny "reportage" maro io an! Eny e, tsy omena tsiny izy, ny torohevitro dia mba ataovy zavatra matihanina izy io razoky a!!
Dia avy eo mandehana :-12
Post� : 2006-05-29 12:27
Tsy dia nieritreritry ny handalina loatra lesy aho fa juste niteny ny impression-ko fotsiny a Azo atao hoe tsikera samirery ny ahy Fa ny ankabeazan'ny reportages sobika aloha hitako tsara.
Post� : 2006-05-29 12:43
Raha vakiako tsara le msg nalefan'i andriandraini de tsy i rabenz no koziny hoe tsy mandalina loatra fa ilay tsikeran'ilay mpanao reportage ;t Avereno vakina anie e.
Fa tena mitombona ny kozinl� @ le resaka eurovision lesy, porofo mitohoka @ tendany ho an'ny mpanao jery ivelany :l
Post� : 2006-05-29 16:46
Tena izaho marina no tsy namaky tsara ... Mamaky maika loatra :)